महिलाले प्यान्ट लगाउनै नहुने ? — onlineakhabar.com
प्रकाशित : पौष २३, २०७४ | १७० पटक हेरिएकोसमाचार
महिलाले प्यान्ट लगाउनै नहुने ?
राधा खनाल-‘हेर न माथि घर फलानोकी बुहारीको लबाइ, जहिले पनि प्यान्ट र टी-सर्ट लगाएर हिँडेकी हुन्छे । आफ्नै ससुरा-जेठाजूका घर नजिकै छन्, कस्तो, लाज-शरम कत्ति पनि नभाकी !’, छिमेकी र आफन्त मेरै कानमा पुगोस् भने झैं गरी यस्ता कुरा गर्छन् । मसँग भने उनीहरूतर्पm फर्केर दिने हाँसोको जवाफबाहेक अरू केही हुँदैन । त्यसो त म पश्चिमकी बुहारी, त्यसै पनि कतिपय चालचलन, रहनसहन र संस्कार मिलेको हुँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि म मेरो हिसाब-किताबमा कतै चुकेकी छु भन्ने लाग्दैनथ्यो।
आफ्नो पेसा पनि पत्रकारिता, जहिले पनि हतारमा कुद्नुपर्ने अनि आफूलाई जे पहिरन सहज लाग्यो त्यही लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भन्दैमा हामी महिलालाई समाजको मतलब नै नहुने भन्ने हैन । हामी कर्तव्यबोध भएका व्यक्ति नै हौं । कार्यक्रममा हिँडिरहँदा प्रत्येक दिन नयाँ अनुहारसँग भेट हुनु पनि स्वाभाविक हो । ‘नानीको माइती कता नि ? के थरीकी ? छोरी बिहेपछि पनि नानीलाई यसरी पाइन्ट लगाएर हिँड्दा घरमा केही भन्दैनन् ? ’ यस्ता प्रश्नसमेत सुनेपछि लाग्यो, साँच्चै मैले कुनै ठूलो गल्ती त गरिनँ!
म त यो समाजको एउटा देखिने पात्र मात्र हुँ । अदृश्यरूपमा रहेका लाखौं दिदीबहिनी छन्, जो शरीरमा लगाउने लुगामा समेत आफ्नो अधिकार र सहजता प्रयोग गर्न सक्दैनन् । महिलाका हक अधिकारका ठूला कुरा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन् । अर्कोतिर हामी प्यान्टमा अल्झिरहेछौं । अहिलेको समयमा आएर यो विषय उठाउँदा उल्टो कतिले ‘अभैm पनि यस्ता कुरामा अल्झिरहेका छौं, महिला अघि नबढ्नुको कारण यही हो’ भन्ने तर्क गर्दा हुन् । झापाको दक्षिण पश्चिम भेग जलथलबाट एउटा प्राइभेट बैंकमा बिर्तामोड काम गर्न आउने सजना श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) को कहानी सुन्दा अचम्म पर्ने खालको छ । ३० वर्षीया उनी कार्यालय आउँदा बाटोमा ड्रेस परिवर्तन गर्नकै लागि एउटा कोठा भाडामै लिएकी छन्।
हाम्रो समाजले फराकिलो दृष्टिकोण राखेर महिलाका अधिकारसँगै भावना र चाहना पनि बुझ्न जरुरी छ ।
सुन्दा पत्याउन मुस्किल तर यथार्थ उनको भनाइमा देखियो । ‘घरमा बूढीसासू अनि सासूससुरा छन् । मेरा श्रीमान् विदेश हुनुहुन्छ । घरमा प्यान्ट लगाउन छुट छैन । उहाँहरूको एउटै इच्छा, मैले प्यान्ट नलगाऊँ भन्ने हो । तर मेरो अफिसको नियमविपरीत पनि म जान सक्दिनँ । त्यसैले घर र अफिसको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले १५ सय रुपैयाँको कोठा भाडामा लिएर राखेकी छु । बिहान घरबाट आउँदा कुर्ता-सुरुवालमा आउँछु, अनि घर फर्कंदा अफिसमा लगाएको प्यान्ट फेरेर फर्कन्छु।’
कतिलाई ‘बाध्यता’ ले बाँधेको हुन्छ भने कतिलाई बदलिँदै गएको समाजसँगै बदलिने चाहना हुन्छ । झापा अर्जुनधाराकै सरिता राजवंशीको कहानी फरक छ । उनी अविवाहित छोरी र सँगै सरकारी कर्मचारी पनि हुन् । जहिलेदेखि निजामती कर्मचारीको पहिरन परिवर्तन भयो, त्यही दिनदेखि उनले घरमा आउने अवस्था रहेन । उनलाई कार्यालय जाँदा सर्ट र प्यान्टमा ठाँटिएर जान मन, तर घरमा छोरी प्यान्ट लगाएर कहींकतै ननिस्कियोस् भन्ने बाबुआमाको इच्छा । यही मतभेदका कारण सरिता अहिले कार्यालयनजिकैै एक्लै कार्यालयको क्वार्टरमा बस्न थालेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘जमाना कहाँबाट कहाँ पुग्यो तर हाम्रो समाज जहाँको त्यहीं छ । बुबाआमालाई कति सम्झाए तर पार लागेन । उल्टो उहाँहरू मलाई त बिहे गरेर गएपछि जे लगा-जे खा, त्यतिबेला हामीलाई दोष हुँदैन । बिहे नभइन्जेल तँ हाम्रो इज्जत हो, पाइन्ट नलगा भन्न थाल्नुभयो । त्यसपछि कार्यालयमा काम बढी भएकाले म घरबाट धाउन भ्याइन भन्ने बहानामा म क्वाटरमै बस्न थालें।’
त्यसो त झापा देशभरिकै विकसित जिल्लामध्ये एक हो । तर पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको यो समाजमा आँखाको अगाडि केही नबोले पनि प्यान्ट लगाएर बुहारी कार्यालय अथवा कामविशेष घुम्न निस्केपछि गेट पुग्दानपुग्दै छिमेकी हुन् या घरकै परिवारले ओठ लेप्य्राउन थालिहाल्छन् । ‘दस हातको साडी लगाएर बस्ने मसँग समय पनि हुँदैन । समयको सदुपयोगको लागि पनि म प्यान्ट लगाउने गर्छु,’ महिला विकास कार्यालय झापाकी कार्र्यक्रम अधिकृत उमा अधिकारी भन्छिन् । नेपाल सरकारले सुगम जिल्लाका निजामती कर्मचारीलाई वर्षको सात हजार पाँच सय रुपैयाँ लुगा भत्तास्वरूप दिने गरेको छ । त्यो पैसाबाट साडी, कुर्ता सलवार अथवा सर्टप्यान्ट जे लगाउन पनि पुग्छ । तर महिला भएपछि घर, बालबच्चाको जिम्मेवारी स्वाभााविक रूपमा बढी नै हुने र बिहान घरको काममा अल्मलिएर कार्यालय निस्किँदा आपैmंमा समय अभाव हुने हुँदा महिला कर्मचारीको रोजाइमा प्यान्ट पर्ने गरेको अधिकारीको भनाइ छ ।
त्यसो त आजभन्दा ४-५ वर्षअघिको महिला दिदीबहिनीको अवस्था र अहिलेको सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन पक्कै आएको छ तर समाजले जुन दृष्टिकोण राखेर महिलालाई हेर्ने गर्छ, त्यो परिवर्तन हुन अत्यावश्यक छ । ‘आफ्नो शरीरमा लगाउने कपडाको अधिकारबाट समेत महिलालाई च्युत गरिन्छ भने महिलाले समाजबाट केकस्ता अधिकारको आश राख्नु ? ’, झापा भद्रपुरकी शिक्षक तथा एकल महिला शारदा भण्डारी निरौलाको तर्क छ ।
‘प्यान्टमा लफडा किन ? आखिर महिलाको पहिचान त साडीमै छ’ भन्ने पनि कतिलाई लाग्दो हो । तर पहिरनको विषय त सहजता र रोजाइको कुरा हो । जसलाई जे मन पर्छ, त्यो लाउने हक सबैलाई छ । कार्यालय जाँदा अथवा कामविशेषमा ह्ँिडदा स्कुटर, मोटरसाइकल या साइकलजस्ता सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बाइकमा मात्रै होइन, बसमा समेत साडी बेरिएर महिलाको मृत्यु भएको खबर हामीले देखे-सुनेका छौं ।
त्यसको मतलब सामाजिक सद्भाव नभड्काउने गरी कपडा लगाउन पाउने सबैसँग अधिकार छ । अब हाम्रो समाजले फराकिलो दृष्टिकोण राखेर महिलाका अधिकारसँगै भावना र चाहना पनि बुझ्न जरुरी छ । अनौठो के छ भने बुहारीको लवाइ-खवाइमा प्रश्नचिह्न उठाइरहने समाजमा कतिपय बाउआमा भने आफ्ना छोरीमाथि चाहिँ यस्तो टिप्पणी गर्दैनन् । एउटी महिलाले शरीरमा कपडा लाउनुअघि अरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष धारणा बुझ्नुपर्ने कुरो लज्जास्पद हो । ज्यान छोप्न लगाउने कपडाको टालोमा कति अल्झन्छौ ए समाज ?
साभार : अन्नपूर्ण पाेष्ट
दाह्री पाल्नुको फाइदाहरु, क्यान्सर हुन बाट बचाउनुका साथै अन्य के के छन् फाइदा? हेर्नुहोस्
नेपालमै यस्तो : श्रीमतिको ईच्छा विपरित यौन सम्पर्क राख्दा…
यौनशक्ति बढाउने केहि प्राकृतिक तत्वहरु [महिला–पुरुष दुवैका लागि]
Materials with source at the bottom of page in this site are from the third party, we are not responsible for that. For further please contact the respective sites. If any materials in this site is offensive to anyone please contact onlineakhabar@gmail.com. We are ready to remove them from our site, conditions apply.
चैत्र महिनाको उत्कृष्ट १०
© Copyright 2016 Ekantipur.News. All Rights Reserved Design By EasySoftnepal